Waa maxay sababta ay u badan yihiin 'versions Bible'? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Kani waa boga shabakada internetka ee aad ka fahmi Injiilka iyo dhamaan khayrkii aay ku hadleen nebiyadu.
Calaamadaha iyo Mucjisooyinka ku qoran Tawreed iyo Qur’anka
Hordhac: Qaabka Kitaabka Quraanka ah uga hadlaayo ‘ Injiilka’ isaga oo ku tilmaamaya inu yahay Ijiilku Mucjiso xaga Ilaahay (Swt) ka timid.
Calaamadaha Qaabiil & Haabiil
Calaamada Nebi Luudh
Saxiix 1 ee Ibraahim: Duceeyey
Calaamada 2 ee Ibraahim: Xaqnimadu
Calaamada 3 ee Ibraahim: Allabari
Calaamadda 1 ee Muuse: Iidda Kormaridda
Calaamadda 2 ee Muuse: Sharciga
Calaamadda Haaruun: 1 Sac, 2 Orgi
Calaamada Tawreedka ee Nabiga
Dhamaadka: Barako & Lacnaday
Sii Sheegid ee Sabuur
Masih soo socda: Calaamadaha ‘Todoba’
Soo Bandhigida Sabuur
Calaamada wiil ka dhalan doona gabadh Bikrad ah
Halkee buu ka Yimi Ciise?
Calaamadda Haraadkeena ama Oonkeena
Calaamadaha axdiga cusub
Calaamadda Laanta: Ciise Masiix oo La Sii magacabay
Calaamaddii Addoonka Soo Socda
Sabuurka Waxaa loo soo xiray iyada oo loo ballan qaaday diyaarinta soo socoto.
Injiilka shaaca ka qaaday
Bentakostiga – Kaaliyaha ayaa u yimaada inuu bixiyo Awood iyo Hanuun
DHALASHADII MASIIXA:Waxaa sii sheegay nabiyadii waxana ku dhawaaqay Jabriil
Nabi Yaxye ama Yooxaana wuxuu diyaariyay wadadii
Ciise Masiix Waxaa jarabay ama tijaabiyay shaydaan
eMasiixa ayaa lagu muujiyay – xagga Baristiisa Awoodda leh
Ciise wuxuu wax ku bogsiiyay- awoodda erayga
Erayga Ciise Masiixi wuxuu ka Awood badnaa Dabeecadda
Boqortooyada Eebeay: Qaar badan baa la casuumay laakiin…
Ciise Masiix wuxuu baray nadaafadda gudaha
Ciise Masiix wuxuu wax ku baray is cafintaa
Ciise Masiix ayaa wax ku baray-Masaalo
Ciise Masiix wuxuu wax ka baray…galida Jannada
Ciise Masiix wuxuu bixiyaa ‘Biyaha Nolosha’
Nebi Yaxye wuu silcay oo muujiyay shahiidnimadiisa dhabta ah.
Ciise Masiix wuxu bixiyay naxariis
Ciise Masiix wuxuu u yimid inuu raadiyo……kuwa lunsan
Ciise Masiix wuu ‘ Xajiyay
Ciise Masiix iyo Calaamaddii Yoonis
Howl galkii Ciise Masiix waxaa ka mid ah soo kicintii Laaseroos
Ciise Masiix wuxuu badbaadiyay Khaa`inul wadan
Ciise Masiix wuxuu ku dhawaaqay Jihaad – qaab yaab leh, ee cadaawe kala duwan, waqtiga saxda ah
Maalinta 1aad: Ciise Masiix – Nuurkii Quruumaha
Maalintii 2: Ciise wuxuu doortay – meesha Al-aqsa & Qubadda dhaxgaxa weyn meeshay maanta tahay.
Maalmaha 3 & 4 – Ciise Masiix wuxuu sii saadaalinayaa mustaqbalka iyo Soo noqoshadiisa
Maalinta 5 – Shaydaan wuxuu u soo degay inuu duqeeyo masiixa
Maalinta 6-Ciise Masiix iyo Jimco wanaagsan
Maalinta 7 – Sabtida nasashada ah
Sara kicidda waa miraha koowaad: Nolosha adigaa leh
Fahamka & Helitaanka Hadiyadda Nolosha ee Ciise Masiix
Waa maxay sababta ay u badan yihiin ‘versions Bible’?
Ka timid Tawreed: U soo joogay Nebi Ismaaciil (NNKH)?
Ibraahim (NNKH) miyuu u allabariyey Ismaaciil ama Isaaq ?
Maxaa dhacaya haddii aan addeeco dhammaan amarrada?
Maxaa dhacaya haddii aanan addeecin dhammaan amarrada?
Immisa ayaan u baahanahay in aan addeecno Sharciga?
Taariikhda reer binu Israa’iil: Miyey ku dhacday Lacnadii Nabi Muuse (NNKH)?
Miyuu Dhammaaday Habaarkii Nebi Muuse (NNKH)?
Sidee loo fahmi karaa Boos ka ‘Wiilka Ilaah’?
Yuu ahaa Yuusuf? Maxay ahayd Calaamadiisu?
Malaa’igta Midigta & Bidixda ma caawiyaan Maalinta Qiyaame?
Sidee Ruut & Bocos u yeesheen sheeko jacayl oo gaar ah?
Habeenkii Awooda, Maalintii Sharafta & Ereygii Nabiyada
Kumuu ahaa nebi Ilyaas? Sidee buu maanta na hagi karaa?
Yuu ahaa Nabi Ayuub,waa maxay muhiimaduu maata leeyahay?
Bisha barakeysan ee Ramadaan – Sidee loo soomaa?
Waa maxay farriinta Kitaabka – Buugga?
Sidee Sabuurrada iyo Nebiyadu wax u sii sheegeen Isa al Masih?
Sidee Tawreeda Muuse wax uga sii sheegay Ciise?
Quraanka & Taariikhda: Ciise al Masix miyuu ku dhintay iskutallaabta?
Gemini ee Zodiac qadiimiga
Ansarka Zodiac qadiimiga ah
Aquarius ee Zodiac qadiimiga ah
Libra ee Zodiac qadiimiga ah
Sagittarius ee Zodiac qadiimiga ah
Taurus ee Zodiac qadiimiga
Aries ee Zodiac qadiimiga ah
Capricorn ee Zodiac qadiimiga
Leo ee Zodiac qadiimiga
Kalluunka ee Zodiac-kii hore
Calaamadaha Noloshayda sida Virgo (Qeyb) & Zodiac ( Xiddigaha)
Scorpio ee Zodiac qadiimiga
Zodiac-ka Esna & Sphinx ee calaamadda zodiac-ku bilaabmay
Lagu kalsoon yahay oo aan la bedeli karin
Kitaabka Injiilka miya la badaley? Muxuu Quraanka Karimka ah ka Leeyahay ariinkaas?
Waa la badalay Injilka! Maxuu Sunnaha uu ariinkas ka qaba?
Quran ka ayaa badalay Kitaabka Quduuska ah! Maxu Quraanku ka leyahay arinkaas?
Qur’aan: Kala duwanaansho ma leh! Xadiisyada maxay sheegayaan?
Film iyo Maqalada
Forty days of one-minute English webcasts
Sheeko saaxiibtinimo leh oo ku saabsan iimaanka. Carabi oo leh qoraal-hoosaadyo EN
Laga soo Kutubta: Calaamada Aadam
Laga soo Kutubta: Calaamada Luudh
Laga soo Kutubta: Calaamada 1 Ibraahim
Laga soo Kutubta: Calaamada Nuux
Laga soo Kutubta: Calaamada 2 Ibraahim
Laga soo Kutubta: Calaamada 3 Ibraahim
Laga soo bilaabo Tawreed: Calaamadii Muuse (Qaybta 1)
Laga soo bilaabo Tawreed (Tirada 19): Sac
Laga soo bilaabo Tawreed (Laawiyiintii 16): Maalinta kafaaraggudka
Waxbarista Isa al Masih – Matthew 25
Laga soo bilaabo Tawreed: Barako iyo Habaar
Laga soo bilaabo buugaagta: Calaamadda Qaabiil iyo Haabiil
Waxbariddii Ciise iyo digniintiisii kadib markuu berkeddii habaaray
Kacaankii Nebi Ciise al Masih PBUH
Hadalkii Dhammaystiran ee Nebi Ciise al Masih (cs) ee Cashadiisii Ugu Dambeysay
Khudbadii Buurta Oo Dhameystiran
Xisaabta Abuurka ee Tawreed
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu yimaadaa Bentakostiga
Cashadii Ugu Dambeysay: Wadahadalka & Waxbarista Nebi Ciise al Masih
Soo muuqashada Ciise al Masih xertiisa
Isa al Masih wuxuu baryayaa Aabaha
Dhowaan waxaan ku sugnaa masaajid oo aan dhageysanayay casharrada imaamka. Waxa uu sheegay wax gabi ahaanba qaldan oo aad u marin habaabin ah. Waxa uu yidhi marar badan oo hore ayaan maqlay – saaxiibbadayda wanaagsan. Waxaana laga yaabaa inaad sidoo kale maqashay tan oo ay maskaxdaada ku dhalisay su’aalo. Haddaba aan ka fiirsno.
Iimaamku wuxuu yidhi way badan yihiin noocyo kala duwan ee Baybalka (al kitab). Luuqadda Ingiriisiga waxaad ka heli kartaa (oo uu u magacaabay) kuwa Kitaabka Quduuska Ah, ka New Version International, ka New American Standard Version, ka New English Version iyo wixi la mida. Dabadeed imaamku wuxuu yidhi mar haddii ay jiraan noocyo badan oo kala duwan, tani waxay muujinaysaa in Kitaabka Quduuska ah (al kitab) la kharribmay, ama ugu yaraan ma ogaan karno ‘runta’. Haa runtii waxaa jira noocyo kala duwan – laakiin tani wax xidhiidh ah kuma lahan musuqmaasuqa Kitaabka Qudduuska ah ama haddii ay kuwani run yihiin kala duwan Baybalka. Dhab ahaantii waxa jira hal Kitaab/Kitaab.
Marka aan ka hadlayno, tusaale ahaan, New International Version, waxaan ka hadlaynaa tarjumaad gaar ah oo laga soo tarjumay Giriiggii asalka ahaa (Injil) iyo Cibraaniga (Taurat & Zabur) oo loo beddelay Ingiriis. New American Standard Version waa tarjumaad kale oo Ingiriisi laakiin laga soo qaatay isla qoraalka Giriigga iyo Cibraaniga.
Isla xaalad la mid ah ayaa ka jirta Quraanka. Caadi ahaan waxaan adeegsadaa tarjumaada Yuusuf Cali laakiin sidoo kale mararka qaarkood waxaan isticmaalaa tarjumaadda Pickthall. Pickthall waxa uu ka soo turjumay isla Qur’aankii Carabiga ahaa ee Yuusuf Cali isticmaalay, laakiin doorashada kelmadaha Ingiriisiga ee tarjumaaddiisa mar walba isku mid maaha. Sidaas awgeed waa tarjumaado kala duwan. Laakiin ma jiro qof – ma Christian, Yuhuudi, ama xataa cawaan ah ayaa sheegay in sababta oo ah waxaa jira laba tarjumaad oo kala duwan oo Qur’aanka oo Ingiriisi (Pickthall’s iyo Yuusuf Cali) taas oo muujinaysa in ay jiraan ‘kala duwan’ Qur’aan ama in Qur’aanka kariimka ah ayaa khariban. Si la mid ah, waxa jira qoraal Giriig ah oo Injiil ah (eeg halkan) oo waxaa jira qoraal Cibraani ah oo loogu talagalay Taurat iyo Zabuur (eeg halkan). Laakin dadka badankiis ma akhriyaan luqadahaan sidaas darteed turjumado kala duwan ayaa lagu heli karaa Ingiriisi (iyo luqado kale) si ay u fahmaan farriinta afkooda hooyo.
Maadaama dad badani ay maanta Ingiriisi u akhriyaan afkooda hooyo waxaa jira noocyo kala duwan – tarjumaadyo – si si fiican loo fahmo. Laakiin ka waran khaladaadka ku lug leh tarjumaada? Xaqiiqda ah in ay jiraan tarjumaado kala duwan miyay tusinaysaa in aanay suurtogal ahayn in si sax ah loo turjumo wixii qorayaashii asalka ahaa ay qoreen? Sababo la xiriira suugaanta qadiimiga ah ee baaxadda weyn ee lagu qoray Giriigga, waxay suurtogal noqotay in si sax ah loo turjumo fikradaha asalka ah iyo erayada qorayaasha asalka ah. Dhab ahaantii noocyada casriga ah ee kala duwan ayaa muujinaya tan. Tusaale ahaan, halkan waa aayad ka mid ah Axdiga Cusub, oo laga soo qaatay 1 Timoteyos 2:5, oo ku jirta Giriiggii asalka ahaa.
Timoteyos γαρ θεος ις και μεσιτης θεου και
Waa kuwan qaar ka mid ah tarjumaada caanka ah ee aayaddan.
Waayo waxaa jira mid ka mid Ilaah iyo mid ka mid dhexdhexaadiye oo u dhexeeya Ilaah iyo binu-aadmiga oo ah ninka Ciise Masiix, New Version International
Waayo waxaa jira mid ka mid Ilaah, iyo mid ka mid dhexdhexaadiye Ilaah iyo dadka dhexdooda, ninka Ciise Masiix; Kitaabka Quduuska Ah
Waayo waxaa jira mid ka mid Ilaah, iyo mid ka mid dhexdhexaadiye oo weliba waxay u dhexeeyaan Ilaah iyo dadka oo ah ninka Ciise Masiix. New American Standard Version
Sida aad naftaada u arki karto waxay aad isugu dhow yihiin tarjumaaddooda – waxay ku kala duwan yihiin laba eray oo keliya. Waxay si isku mid ah u sheegaan adeegsiga kelmado kala duwan. Sababtu waxa weeye waxa jira hal Kitaab/Baybalka oo keliya, sidaa awgeed tarjumaaddii ka timid waxay noqon doontaa mid la mid ah. Ma jiraan Baybalyo ‘kala duwan’. Sida aan ku qoray bilowgii, gabi ahaanba waa khalad in qof kastaa sheego sababtoo ah waxaa jira noocyo kala duwan oo macnaheedu yahay inay jiraan Baybal kala duwan.
Waxaan ku boorrinayaa qof walba inuu doorto nooca al-kitab/Baybalka oo ku qoran afkiisa hooyo si uu u akhriyo. Aad bay u mudan tahay dadaalka.